Kismaayo News » Ma dooran la heyd Madax aan Mudnayn?
Ma dooran la heyd Madax aan Mudnayn?
Waxaa la wada ogsoon yahay in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aanan loo ogolayn inay dadka madaxda u noqon lahaa ay dooran, waayo waxaa la yiri ama la isu sheegaa in ummadda Soomaaliyeedi diyaar aheyn oo aysan howshaas ballaaran aysan awoodi karin, weyna aqbaleen kuwa madaxda looga dhigay oo waxey dan u arkeen in ay iyagu soo magacaabaan mid madiidin u ah oo ay is lee yihiin waxa uu kuu fulin doonaa waxa aad rabto.
Waxaa marag ma doonta ah in ay caalamka ka jiraan meelo badan oo innaga mashaakil badan hadana ummadahooda loo ogolaaday inay iyagu doortaan kuwa ay madaxda ka dhiganayaan, balse cabsi laga qabo in ummadda Soomaaliyeed xor looga dhigo inay doortaan kuwii iyaga matali lahaa, ayaa keentay in maanta la yiraahdo waxaan kuu magacaabeynaa kuwo sida xoolaha oo kale xilka u iibsada loogana iibsado markey mudane noqdaan oo lacagta ma ahane aanan wax kale wax ku miisaamin. Waxaanse halkaan idiinku soo gudbinayaa, Haddii fursadda na loo diiday aannu heli laheyn oo shacab ahaan awood naloo siin lahaa inaynnu xulanno kuwa wax noo maamulaaya qaabkii aannu ku xulan laheyn iyo calaamadaha uu yeelan lahaa qofka howshaas loo diraayo.
Waxaanse marka hore rabaa inaan ka afeefto akhristow haddii aad si indho la’aan ah aad u taageersan tahay musharax oo aadan jeclayn in hoos loo fiiriyo shuruudaha laga rabo qofka xilalkaan isu taagaaya, fadlan ha sii akhrinin qoraalkaan. Waxaa laga yaabaa inaad u akhrisato in qof kaas wax looga sheegaaayo, waxaana halkaan ka cadeynayaa inuusan qoraalkaani taageero u aheyn qof ama qolo gooni ah, balse uu tilaamaayo wixi uu ilaahey naga tusiyay, oo aan is lee nahay waa in qof loogu doortaa xil.
Waa marka hore qofka mudane noqonaya inta aanan la gaarin madaxweyne waa inuu noqdaa, qof Alle ka cabsigu ku weyn yahay oo aanan sheegin inuu ilaahey ka cabsado kaliya, balse ficil ahaan u sameeya. Waxkasta u kala qeybiya wax illahey ka raali yahay iyo wax uusan ka rali aheyn. Waa inuu noqdaa qof lagu yaqaanno ammaano dhowr, oo wixii loo dhiibto loogu yimaado, haddii wax qeybi la yiraahdana u qeybiya sidii loogu tala galay, oo ka fayow xumaha na dilooday ee qabyaalaysiga ku dhisan iyo si xun wax u raadiska ummadda kala reebay. Waa inuu gartaa in haddii loo doorto xildhibaan uusan xildhibaan u ahayn dadkii meesha geeyay oo uu xildhibaan u yahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dalka uga nool yihiin loogana fadhiyo inuu xilkiisa u guto si horumar u leh ummada Soomaaliyeed dhamaanteed illeen Soomaali wixii qof dhiba dhammaan dhib ayuu ku yahay.
Qofka intaas laga helo ee raba inuu xil kale ummadada u qabto qaasatan kuwooda awoodaha qaaska ah leh oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka, waxaa laga rabaa inuu yahay qof caadil ah oo u caadil fali kara ummadda dhamaanteed oo dadka iyo dalka ka celin kara daniistaha, oo meesha uu maamulo ka dhigi kara meel Soomaaliyu u madax bannaan tahay oo aan dalka iyo dadkaba aanan lagu qasbin waxaanan xaq loogu laheyn, oo isagu u taagan difaaca diinta, dalka iyo dadkaba, isagoo isticmaalaya awoodaha sharciga ah ee la siiyay, oo weliba ku xadgudbaynin madaxda wadashaqeyntu ka dhaxeyso, oo mar kasta ilaalinaya inuu dhaafo meesha loo sharciyeeyay garanaaya xadka ilaaley iyo xuduudaha ay wadashaqeyntu keento. Waa inuusan noqonin qof dantiisa ka hormariya danta baarlamaanka iyo mudanayaasha uu wakiilka u yahay. Waa inuusan noqonin mid meel kasta taagnaada oo aadba ka yaabto inuu isagu hayo xil kasta oo ka mid ah xilalka dalka, meel kastana u taga, wax yeysan kugu dhaafin. Waa inuu noqdaa mid dhexdhexaad u ah awoodaha maamulka dalka, waa inuu noqdo mid cadaaladdu ku weyn tahay oo si hoose iyo si sareba u saxa meeshii ay wax ka qaloocdaan, lehna la taliyayaan iyagu awood u leh in ay ka dhowrsadaan markay tala bixinayaan inay dano adduun oo tooda ah difaacaan, balse ay talada ka fiiriyaan waxa dalka iyo dadka danta u ah.
Marka intaas la helo oo ay timaado in la iska dhex raadiyo ninkii dalka garwadeenka ka noqon lahaa oo intaas oo dhan isku wedi lahaa magacaabina lahaa dhowlad tigaad iyo tayo leh, waxaa nafsadiisa laga rabaa inuu noqdo qof markiisa horeba yaqaanna, meesha uu u socdo iyo weliba waxa looga baahan yahay inuu qabto si looga dhamaado isqabqabsiga 12ka sano ee la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed faceed ka reebay. Madaxweynuhu waa inuu noqdaa qof leh qorsho siyaasadeed oo dadka iyo dalka u horseedi kara CADAALAD iyo NABAD. Si taas loo helana waa inuu marka horeba uusan madaxweynuhu aheyn qof difaacaya dano qaas ah iyo dano qolo gaar ah, kana madax bannaan fikirka ah maadaama aan madaxweyne ahay waxaan ahay, wax kasta oo waa inay wax kasta i hoos yimaadan, oo kan dhulka xaaqa ilaa kan ra’iisul waxaasaraha waxaan rabo haddii aan ka waayo waan ceyrinayaa.
Waa in qofka uu u dooranayo inuu Ra’isul wasaare u noqdo dowladiisa, uu yahay qof ay ku heshiiyeen qorshahiisa siyaasadeen, meelna marin kara wixi ay isku afgarteen oo aysan imaanin mar danbe is qabqabsi keena isjiijiidad iyo in dadku waayaan waxa ay filanaayaan. Waa inuu Madaxweynuhu noqdaa mid difaaca waxa uu isagu uu abuuru oo uusan noqonin mid isagu burburiya wixii wanaaga ahaa oo uu sameeyay si uu u helo wax uu isleeyahay dan ayaa kuugu jirta. Madaxweynuhu waa inuu noqdaa qof fiira dheer leh oo aanan fiirin waxa muuqda oo kaliya, diyaarna u ah in la saxo haddii ay wax ka sibiibaxdaan, mar kastana si hoose wax u saxa. Wax kastana ka hormariya danta guud, oo wax kasta uga hara horumarka dalka iyo dadaka Soomaaliyeed.
Madaxweynuhu waa inuusan noqonin mid isku xeyn daaba kuwo uu heyb yaqaan iyo kuwo uu xulufu la yahay maanta, oo isku danaysta ka dhexeyso, waase inuu xushaa kuwo intaas ka ballaaran oo fahmi kara in waxa uu hayo ay ummadda ka dhexeeyaan, waxa uu qeybinaya ay Soomaaliyoo dhami qeyb ku lee yihiin. Waa in la yaqaanno waxa uu heysto madaxweynuhu si ay meesha uga baxdo waxbuu dhunsaday. Madaxweynuhu waa inuu noqdaa mid hashiiska ka hormariya handadaada oo weliba wax kasta oo heshiis lagu gaari karo uusan colaad ku raadin.
Qofka madaxweynaha loo dooranaayo waa inuusan noqonin mid horay loogu yaqaanay wax kasta oo ummadda kala fogeynaya, waana inuu ahaado mid ugu yaraan waxa laga filanaayo horay looga arkay oo ay jiraan waxqabad uu meel ummadda Soomaaliyeed uga sameeyay ha ahaadaan dalka ama dibadaba.
Waxaa la hubaa haddii dalku yeesho madax ku sifaysay sifayaasha aan kor ku soo sheegnay in isbedel la taaban karo oo xag kasta ah uu muuqan doono. Waxaanse ku soo gabagabaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka mid yihiin, doonayninna in dadka madax looga dhigo: daniiste, denbiile iyo diinlaawe aan wax ay ummadda u soo kordhinayaan aysan jirin. Soomaalidu waxa ay rabtaa madax rabta inay reebaan wax lagu xasuusto, oo aan iyagu u socon inay macluusha maatada Soomaaliyeed ka maalaystaan, oo fahmi kara waxa looga fadhiyo. Ilaaheyna waxaan ka baryeynaa isagaa awoodee inuu ummadda ka qabto kuwa sida xun wax ku raadiya oo dadka aan nolosha u ogolayn oo yiraahda wax kasta anay igu fiican yihiin oo aysan waxba ka soo harin. Noona keeno kuwo caadil ah oo ummadiisa u damqadha kana bixiya dhibka iyo colaada ku dheeraatay. Aamiin